इरानी युवती किन असाध्यै सुन्दरी हुन्छन ? यस्तो छ ८ रहस्य ! - ramechhapkhabar.com
राम्रो कसलाई भन्ने ? आकर्षक को हुन् ? यसमा सबैको मत मिल्छ भन्ने छैन । भूगोल र समुदाय अनुसार सुन्दरताको मापन पनि भिन्न भिन्नै हुनसक्छ । कतै कालो छाला मन पराइन्छ भने, कतै गोरो । कतै पातलो ओंठलाई आकर्षक मानिन्छ, त कतै मोटो ओंठलाई । कसैले सलक्क केस रुचाउँछन् भने, कसैले कर्ली ।
यद्यपी झट्ट हेर्दा हामी जस्तो सौन्दर्यबाट मोहित हुन्छौं, त्यसमा अधिकांशको मन मिल्छ । यस हिसाबले सौन्दर्यको चर्चा गर्दा इरानी महिलाहरु जोडिन आउँछ । आँखा, अनुहारको बान्की, शरीरको बनौटले उनीहरुतर्फ सबैको ध्यान खिचिन्छ । इरान एक मुस्लिम बहुल देश हो । त्यहाँ महिलाको जीवन त्यती सहज छैन । यद्यपी सुन्दरताको कसीमा उनीहरुले विश्वका महिलाहरुलाई उछिन्छन् । कसरी ?
इरानी महिलाहरुले आफ्नो डाइटमा माछा र ओखर सामेल गर्छन् । उनीहरु मह पनि नियमित रुपले सेवन गर्छन् । ओखरमा भिटामिन इ पाइन्छ, जसले अनुहारमा चमक ल्याउँछ । इरानी महिलाहरु विशेषगरी गहुँलाई पिनेर बनाइएको खाना ‘बल्गर’ खाने गर्दछन् । यसले अनुहारको छालाको चमकका साथै शरीरीक बनावटलाई नियन्त्रित गर्ने गर्दछन् ।